China Sheet Metal mveliso kunye nabenzi | Khokela
Isiko lethu iphepha lesinyithi iinkonzo zibonelela ngesisombululo esineendleko kunye nesifunekayo kwiimfuno zakho zokuvelisa. Sinesantya esiphezulu, imeko yesixhobo sobugcisa besinyithi esilungele ukuvelisa izixhobo zentsimbi ezizinzileyo, ezisetyenziselwa ukuphela, eziphindaphindayo, eziphantsi ukuya phezulu kunye nemveliso yokuxuba okuphezulu eyenziweyo kwimigaqo yakho.
Umsebenzi wesinyithi yinkqubo yokwenza isinyithi eyenza iimveliso ezintsha ezivela kwiintlobo ezahlukeneyo zetsimbi. Iinkqubo zokufudumeza zisetyenziselwa ukwenza lukhuni okanye ukuthambisa iphepha lesinyithi ngokufudumeza okanye ukupholisa de lifike kwinqanaba elinqwenelekayo lobulukhuni, kwaye kunjalo kukwimo esebenzayo. Zininzi iindlela ezibalulekileyo ezinokusetyenziswa kwinkqubo yokunyanga ubushushu, kubandakanya ukufakelwa umbane, ukucinywa, ukomeleza imvula kunye nokubila
Isebenza njani i-Sheet Metal Fabrication
Zintathu izigaba eziqhelekileyo kwinkqubo yentsimbi eyila, zonke ezinokugqitywa ngeendlela ezahlukeneyo zezixhobo zokuzenza.
● Ukususwa kwezinto eziphathekayo: Ngeli nqanaba, i-workpiece eluhlaza iyasikwa imilo oyifunayo. Zininzi iintlobo zezixhobo kunye neenkqubo zoomatshini ezinokususa isinyithi kwindawo yokusebenza.
● Material Deformation (bokwakha): Iqhekeza lesinyithi eluhlaza ligobile okanye lenziwe imilo ye-3D ngaphandle kokususa nayiphi na into. Zininzi iintlobo zeenkqubo ezinokubumba umsebenzi.
● Ukudibanisa: Imveliso egqityiweyo inokudityaniswa ivela kwimisebenzi emininzi esele yenziwe.
● Uninzi lwezibonelelo zibonelela ngeenkonzo zokugqiba ngokunjalo. Iinkqubo zokugqiba zihlala ziyimfuneko ngaphambi kokuba imveliso eyenziwe ngentsimbi ilungele ukuthengiswa.
Izicelo zeMetal Sheet
Ukuvalelwa -Iphepha lesinyithi libonelela ngendleko ngendlela efanelekileyo yokwenza iipaneli zezixhobo zemveliso, iibhokisi kunye neemeko ezahlukeneyo zezicelo. Sakha iindawo ezivalekileyo zazo zonke izitayile, kubandakanya iirockmounts, "U" kunye no "L" iimilo, kunye nokuthuthuzela kunye nokuthuthuzela.
I-chassis -I-chassis esiyenzileyo ihlala isetyenziselwa ukugcina ulawulo lwe-electromechanical, ukusuka kwizixhobo ezincinci eziphathwayo ukuya kwizixhobo ezikhulu zovavanyo lweshishini. Zonke i-chassis zakhelwe kwimilinganiselo ebaluleke kakhulu yokuqinisekisa ukulungelelaniswa kwepateni yomngxunya phakathi kweendawo ezahlukeneyo.
Izibiyeli -zakha iibrakhethi zesiko kunye nezinto ezixineneyo zesinyithi, zilungele ukusetyenziswa nokuba zilula okanye xa kufuneka inqanaba eliphezulu lokumelana nomhlwa. Zonke izixhobo zekhompyutha nezihlanganisi ezifunekayo zinokwakhiwa ngokupheleleyo ngaphakathi.
Ukusika i-Laser, ukusika iPlasma, ukusika i-Waterjet, ukubetha i-CNC, ukugoba i-CNC, ukuwelda, ukudibanisa, njl
IAluminiyamIntsimbi, Yenziwe ngentsimbi eshayinayo, ubhedu, ubhedu
I-Anodized, sandblasted, ipolishiwe, ipowder, i-electroplated, njl
Uvavanyo lwePhepha le-1, kwiNkqubo, kwiFinal
Ezolimo, iTraki, imoto, elektroniki, ezonyango, ifanitshala, izixhobo zekhompyutha, oomatshini, njl
CNC Machining, Ukuguqula i-CNC, Metal Ukunyathela, Iphepha lesinyithi, Kugqityiwe, njl
Egqithileyo Metal Ukunyathela
Okulandelayo: Icandelo leTitanium